बुद्धधर्ममा किन प्रवजित हुने ? - Dainik Headlines
Dainik Headlines Nepali Khabar from Nepal
Home / Dharma / बुद्धधर्ममा किन प्रवजित हुने ?
बुद्धधर्ममा किन प्रवजित हुने ?
Dainik Headlines April 1, 2019	Dharma
मिलिन्दराजा र नागसेन भन्ते जी को प्रश्न उत्तर यसप्रकार छ ।
प्रश्न- “भन्ते नागसेन१ मानिसहरू पनि प्रवजित हुन्छन्रु प्रवजित भइसके पछि उनीहरूको परम उद्देश्य के हुन्छ ?
उत्तर- “माहाराज १ उत्पन्न भइरहेका दुःखहरू निवारण गर्नुका साथै फेरि अर्को दुःख सृजना हुन नदिनका लागि मानिसहरू प्रवजित हुन्छन् । प्रवजित भइसके पछि उनीहरूको परम उद्देश्य फेरि जन्मनु नपर्ने गरी निर्वाण पाउनु हुन्छ।
प्रश्न- “के सबै जना त्यसैको लागि प्रवजित भएका हुन्छन् त ?
उत्तर- “हैन महाराज १ कोही कोही मात्र त्यसको लागि प्रवजित भएका हुन्छन्। अरू हरूमा कोही कोही राजासंग डराएर प्रवजित भएका हुन्छन् त कोही चोर देखि डराएर प्रवजित भएका हुन्छन् । कोही ऋण तिर्न नसकेर प्रवजित भएका हुन्छन् त कोही खाली पेट भर्नको लागि प्रवजित भएका हुन्छन् । अरु सबै त्यसैको लागि प्रवजित भएका हुन्छन्।
प्रश्न-“तपाई त त्यसैको लागि प्रवजित हुनु भएको होला होइन ?
उत्तर- “होइन महाराज१ म सानै उमेरमा प्रवजित भएको थिएँ। केका लागि प्रवजित होइन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला मलाई पनि थाहा थिएन। म त्यस बेला -बौद्ध भिक्षुहरू पण्डित छन् र उनीहरूले मलाई पनि केही शिक्षा देलान भन्ने सोचेर प्रवजित भएको थिए। वास्तवमा केका लागि प्रवजित भइन्छ भन्ने कुरा उनीहरू सित सिकेर मात्र मैले थाहा पाएको हुँ।” लिखित मिलिन्द प्रश्न भाग एक पुस्तक बाट । भवतु सब्ब मंगलम्, सहभाजन सहयोगी – बिष्णु धनञ्जय, अनुवाद – निर्मल MGK
Previous प्राचीन जानकी मन्दिर : मन्दिर होइन दरबार थियो
Next गर्मीमा मोटोपन घटाउने ६ खाना….
कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? जानी राख्नुस्
यी हुन् कहिले पनि प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवतीहरु, जानी राखौ पुरा पढ्नुस
सोमबार साँझ शिवलिंगमा १ मन्त्र जप गर्दै बाल्नुहोस् घ्यूको दियो, पुरा हुन्छ मनोकांक्षा
एक महिनामै दुब्लाउन चाहनुहुन्छ ? छोड्नुहोस् यस्ता सात बानी
महिलाको शरिरमा देखिने निलो दाग बोक्सीले टोकेर हो ?
मुख धुँदा यी ५ गल्ती गर्नुहुन्छ, त्यहि भएर डण्डिफोर आउँछ….
गर्मीमा मोटोपन घटाउने ६ खाना….
प्राचीन जानकी मन्दिर : मन्दिर होइन दरबार थियो
रुघा-खोकी तथा नाक, कान, घाँटीको समस्या हुनेहरूका लागि अचुक दबाइ
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला।
Site by Dainik Headlines